Zomà faharoa mandavantaona – Trinitera Malagasy
Tsy ankasa Hebrio 8, 6-13/Salamo 84/
Ankasa 1 Samoela 24, 3-21/Salamo 56
Md Marka 3, 13-19
Avy eny amoron-danomasina dia niakatra teny amin’ny tendrombohitra i Jesoa ka niantso izay tiany hankeo aminy. Izay tiany no nantsoiny, fa iza moa no tsy tiany? Tian’i Md Marka asiana tsindrim-peo amin’izany fa tsy ny fahamendrehantsika fa ny fitiavany no iantsoany antsika. Tsy misy afaka hanatona azy raha tsy fahasoavana avy aminy. Tsy miantso izay mendrika izy, hoy Md Augustin, fa mandavorary kosa ho mendrika izay nantsoiny. Izany no mahatonga ho antony voalohany hiantsoany ny Mpianatra dia ny “hitoetra eo aminy”, hizara ny fiainana aminy, “ho avy ka hahita” izay hitoerany sy ny fomba fiainany, hianatra ny fomba fisainany mba ho afaka hitory ny Teniny fa tsy hitory tena.
Ho antsika tiany ka nantsoiny ho mpianany ary, zava-dehibe ny fandaminana ho vaindohan-draharaha ny fiaraha-miaina amin’i Jesoa. Tsy ho an’ny pretra sy relijiozy irery sanatria fa ho an’izay te ho kristianina rehetra dia tsy maintsy hikolokolo ny fanokanana fotoana sy toerana hihaonana bebe kokoa amin’i Jesoa, hihainoana (Simona) sy handalinana ny Teniny, hijerena ny fiainana araka ny fampianarana sy ny sitrapony, izany moa no atao hoe mivavaka. Mila mandini-tena mandrakariva manko sao sanatria milaza ho tsy manam-potoana isika, fa maharaka vaovao politika sy resadresaka mandany jiro etsy sy eroa, kanefa tsy mahita fotoana hivavahana intsony!
Izay mitoetra miaraka aminy sy manaiky hovolavolainy ihany no afaka hitory ny Teniny. Io no iraka manaraka ampanaoviny ny mpianany (mission faharoa). Ny dikanteny hitantsika ao amin’ny Sorona Masina ao moa dia milaza fa “sady hanam-pahefana hanasitrana ny aretina sy handroaka ny demony”. Ny TOB (dikanteny iombonana) dia manampy antsika hahazo ny fahefana nomena ny Apostoly: nirahin’i Jesoa ny Apostoly mba hitory ny Teniny ary io Teny io no manana ny hery handroaka ny fanahy maloto (tsy misy “hanasitrana aretina” ny dikanteny grika). Tsy herin’ny Apostoly fa herin’ny Tenin’Andriamanitra toriany no manova ny fon’ny olona. Ary matoa izay tsy manan-kery dia tsy mbola Tenin’Andriamanitra izay fa mety ho fahendren’olombelona fotsiny ihany izany no torìna. Ny herin’ny Teny no manova ny fiainana.
Eo amin’ny fitanisana ny anaran’ny Apostoly dia ambaran’i Marka mazava fa ao koa ry zana-baratra (ben רְגַזregats= zanaky ny fahatezerana) sy ry Jodasy Iskariota, ilay nanolotra azy (παραδίδωμι paradidomi). Tiany avokoa izy ireny. Tsy mialonjafy ny fitiavany. Fahatokisana ho antsika izany ka manampy antsika ho tonga mpianatra mahatoky, ho iraka hitory ny Teniny hatraiza hatraiza.